Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan cimilada iyo sida ay u shaqeyso | Saadaasha Shabakadda
Way badan yihiin qalabka saadaasha hawada kuwaas oo loo isticmaalo in lagu cabbiro isbeddelada saadaasha hawada ee kala duwan. Mid ka mid ah, oo si ballaadhan loo adeegsaday ilaa waqtiyadii hore, ayaa ah muraayad Waa aalad saadaasha hawada ah oo loo adeegsado in lagu cabiro jihada dabaysha. Halkan Spain waxaan ku leenahay dabeylaha jira, laakiin in la ogaado jihada dabaysha iyo in la aqoonsado midka aan leenahay hawo cimilada.
Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato hagida cimilada? Halkan waxaan ku baraynaa wax walba oo ku saabsan astaamaheeda iyo waxtarkeeda.
2 Hawlgalka marawaxadaha dabaysha
3 Noocyada muraayadaha dabaysha
4 Sida loo cabiro dabaysha
Waa aalad loo isticmaalo in lagu cabiro jihada dabaysha. Waxaa la dhigayaa dusha sare ee dhismooyinka ama meelaha sare si ay uga faa'iideysan karto qulqulka dabeylaha iyadoon wax caqabad ah la horkeenin. Maaddaama lagu dhejiyay dusha sare ee dhismaha, moodello iyo naqshado kala duwan ayaa loo sameeyay maaddaama ay u adeegayso sida qurxinta dhismaha. Naqshadeynta ugu dhaqameed waa tan diiqii.
Waa aalad wareegaysa iyadoo ku xidhan xawaaraha iyo jihada dabaysha. Waxay leedahay iskutallaab siman oo tilmaamaysa qodobbada kadinal. Waxa kale oo aad ka heli kartaa naqshadaha kale ee muraayadaha hawada sida maraakiibta, fallaaraha, fardaha ama xitaa tirooyinka dadka. Waxaa jira baabuuro badan oo cimilada ah oo loo arko inay yihiin shaqooyin farshaxan oo run ah taasoo ay ugu wacan tahay naqshadooda casriga ah iyo faahfaahinta ugu yar.
Waxaa loo isticmaali jiray muddo dheer by fududaanta aad haysato markaad turjumeyso xogtaada. Runtii ma bixinayso macluumaad ku saabsan xoogga ama xoogga dabaysha, laakiin ugu yaraan waan garan karnaa jihada ay ku kala garanayso dabeylaha Isbaanishka ee jira.
Si loo ogaado xoogga dabaysha, anemometer-ka ayaa lagu dhex daray muraayadda loo isticmaalo in lagu cabbiro xoogga dabaysha sidaas darteedna aaladda cabbiraadda waa la dhammaystiray.
Hawlgalka marawaxadaha dabaysha
Hawlgalka qalabkan saadaasha hawada waa mid fudud. Waxay leedahay dhidibka wareegaa iyo tilmaame jihada dabaysha. Calankan ayaa lagu dhejiyay dhejiska wuxuuna si miisaaman ugu qaybiyaa si miisaaman. Naqshadeynta, wax kastoo ay tahay, waa inay lahaato tilmaame ama tilmaame qeybta bixisa iska caabbinta ugu yar ee dabaysha si ay ugu adeegto tilmaame jihada dabaysha.
Waxaas oo dhan, waxaa lagu gaadhay, marka ay dabayshu dhacdo, hareeraha ayaa dhigaya qaybta calaamadeynta taasoo yareynaysa iska caabbinta hawada qaybta ugu badan ee jihada dabaysha. Badanaa lJihada dabayshu waxay lamid tahay taangiga dabayshu tilmaamayso. Xaqiiqadani waa sababta oo ah jihooyinka dabaysha ayaa lagu qeexay wareegga. Hawada cimilada ee u jeedda woqooyi waxay muujinaysaa in dabayshu u socoto waqooyiga.
In kastoo loo maleynayo inaysan saameyn badan laheyn, goobta hareeraha cimilada gebi ahaanba waa go'aan marka la qaadanayo xogta. Haddii aan dooneyno akhrinta muraayadda inay ahaato mid la isku halleyn karo oo sax ah, waa inaan dhignaa meel aad uga saraysa dhulka sida ugu macquulsan. Tani waa sababta oo ah, meelaha ugu hooseeya, waxaad la kulmi kartaa caqabado badan. Tusaale ahaan, dhererka dhismayaasha kale waxay u shaqeyn karaan darbi ahaan ama shaashad waxayna daciifin karaan dabaysha ama waxay beddeli karaan jihada ay u socdaan. Hawada cimilada waa inay ku taal meel ka fog dhismayaasha, geedaha ama caqabadaha kale ee wax ka beddeli kara xogta aqrintiisa. Caqabadahaas ayaa awood u leh inay ka dhigaan akhrinta mid aan ku filnayn waxaana jira leexashooyinka hawada hawada.
Muuqaalka cimilada oo si xun loo dhigay wuxuu u horseedi karaa saadaalin khaldan, maaddaama jihada dabayshu ka dhigi karto saadaashu mid aad u kala duwan muddada gaaban.
Noocyada muraayadaha dabaysha
Wenko - Bisadda Weather Vane ...
Weathervane - Cimilo Vane leh ...
Waxay kuxirantahay naqshadda midkasta, waxaa jira noocyo badan oo hawo-mareenka ah mid walbana wuxuu leeyahay astaamo kaladuwan. Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno mid kasta oo ka mid ah oo aan sheegno astaamaha ugu muhiimsan.
Baabuurta dabaysha. Qaabkani waa midab jaalle ah wuxuuna u eg yahay diyaarad. Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo saqafyada iyo jardiinooyinka. Dhameystirka waxaa laga sameeyay caag tayo wanaagsan leh, sidaa darteed wuxuu u adkeysan karaa xaaladaha cimilada ugu xun. Way ku habboon tahay muujinta xawaaraha dabaysha.
Vane cimilada saqafka. Muuqaalka cimilada noocan ah ayaa ku habboon dhammaan noocyada saqafyada, maaddaama ay leedahay dhammaystir bir ah. Waxay leedahay dhammaan qodobbada aasaasiga ah waxaana lagu sameeyaa qaar ka mid ah dhammaadka polyamide. Maaddadani waxay leedahay adkaansho weyn mana jabayso ama sii xumaanayso waqti ka dib.
Baabuurta hawada ee hore. Haddii aad ka mid tahay kuwa soo jireenka ah ee jecel inay soo ceshadaan duuggii hore, kani waa qaabkaagii. Waxay leedahay bir dhameystiran waxayna cabirtaa xawaaraha dabaysha si aad u wanaagsan. Waxay si fiican isugu dari kartaa qurxinta qaabka-guridda dhammaadkeeduna wuxuu ku dayanayaa qaabkii hore ee baabuurada cimilada. Waxay leedahay maaddo diida inay si fiican u xidhaan.
Qar-qub cimilada. Xulashadani waxay ku habboon tahay jardiinooyinka ama balakoonnada. Waxay leedahay dhammaad xuub ah oo matalaya xayawaanka caadiga ah ee dusha sare. Midabkiisu waa madow oo wuxuu si fiican u caabiyaa dhammaan xaaladaha cimilada xun iyada oo ay ugu wacan tahay maaddada tayada leh ee lagu dhisay.
Faankooyinka cimilada asalka ah Dabcan, qaabka mid waliba uga adkaado kuwa kale. Waxay ku dhisan yihiin 3 milimitir qaro weyn. Gabalku wuxuu leeyahay daahan maaddada iyo dhammaan qaybaha leh polyamide. Sidaa darteed, waxay noqoneysaa qalab saadaasha hawada aan la jebin karin.
Sida loo cabiro dabaysha
Way fiicantahay in saqafka sare lagu rakibo hawo-mareenka, laakiin faa'iido yar ayey yeelan doontaa haddii aynaan aqoon sida loo cabbiro dabaysha. Jihada dabayshu waa ta ay ku socoto oo lagu cabiro darajooyin. Darajooyinka waxaa laga tiriyaa juqraafi ahaan woqooyi iyo jihada saacadda.
Adiga iyo wadajirka anemometer-ka, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato xawaaraha iyo xoogga uu dabayshu u socoto. Qalabka hawadu waa midka tilmaami doona jihada dabaysha iyadoo ku xidhan hadba meesha ay u socoto. Sidan ayaad ku ogtahay "meesha ay dabayshu ka timaado." Sidan oo kale, waxaad dareemi doontaa sida dadkii hore ee adeegsan jiray baalasha cimilada si ay u ogaadaan jihada dabaysha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka ogaan karto gawaarida gawaarida iyo howlgalkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » muraayad
Albedo ee Dunida